နှစ်သစ်မှာ ပရိသတ်တွေအားလုံးအံ့သြသွားအောင် စုံတွဲပုံလေးတွေ ချပြလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
လူတိုင်းက နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ပဲဖြတ်သန်းချင်ကြပါတယ်။ ၂၀၂၁ ရဲ့ ပထမဆုံး နေ့ရက်မှာ ဖြူဖြူကတော့ ကျော်ထက်အောင်နဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ ရိုဆန်ဆန်ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက နှစ်ယောက်အတူ MTV လေးတွေတွဲရိုက်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိခဲ့သူတွေပါ။
ဒီနေ့မှာလည်း အင်္ကျီအရောင်ဆင်တူလေးတွေနဲ့ ကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းတဲ့ စုံတွဲပုံလေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ ပါတယ်။ တကယ့်ချစ်သူစုံတွဲတွေလို ပြုမူနေတဲ့ပုံလေးတွေဟာ နှစ်ယောက်သား တကယ်များချစ်သူဖြစ်နေကြပြီလားလို့ သို့လောသို့လောထင်စရာပါပဲ။
ဒီလိုပုံလေးတွေကို ” အချစ်စစ်လား အချစ်တုလားဆိုတာ နှလုံးသားကပဲမြင်နိုင်တာ တကယ်ကိုအချစ်ရှိတယ် Happy New Year to all our fans. Phyu Phyu & Kyaw Htet. ” ဆိုပြီး တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်သားတကယ်ပဲ တွဲဖြစ်ခဲ့ရင် ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်ကိုလည်း မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါဦးနော်။
နိုင်ငံကျော် Rocker ကြီး လေးဖြူသီဆိုထားတဲ့ “ရိုးမပေါ်ကျတဲ့ မျက်ရည်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေး
April 4, 2020 Cele Family
စာမေးပွဲဖြေနိုင်လို့ ပျော်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်တွေ